युवतीहरु होसियार ! यस्ता केटाहरु हुन्छन् धोकेबाज – Jagaran Nepal
युवतीहरु होसियार ! यस्ता केटाहरु हुन्छन् धोकेबाज
एजेन्सी । प्रायः युवतीहरू मीठो बोल्ने केटाको कुरा छिट्टै पत्याइहाल्छन् र धोका खान पुग्छन् । तर अलिकति दिमाग लगाउने हो भने धोकेबाज केटाको बारेमा थाहा पाइहालिन्छ । तल लेखिएका कुरा पढेर तपाईं धोकामा पर्नबाट बच्न सक्नुहुन्छ । प्रायः केटाहरूले युवतीलाई भेट्नेबित्तिकै आफ्नोपन देखाउँदै मीठोमीठो कुरा गर्न थालिहाल्छन् ।
कति राम्री भन्दै तारिफ गर्न थालिहाल्छन् । अनि युवतीलाई कस्तो राम्रो केटो रहेछ भन्ने लाग्छ । तर वास्तवमा ऊ राम्रो मान्छे नहुनसक्छ । फ्लर्ट गर्न माहिर र धोकबाज चरित्र भएका युवकहरू मीठो बोल्न माहिर हुन्छन् । मीठो कुरामा फस्ल्याङफुस्लुङ पारेर युवतीलाई पट्ट्याउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको सोच हुन्छ ।
धेरै पुरुषको मान्यता के हुन्छ भने महिलासँग नजिक हुने भनेकै शारीरिक सम्बन्ध बनाउनका लागि हो । अनि यस्ता पुरुषले महिलासँग सेक्स सम्बन्धी कुरा गर्न खोज्छन् । गलत नियत भएका पुरुषको रहस्यमयी व्यक्तित्व हुन्छ । यस्ता मान्छे मोबाइलमा झुण्डिएर बसेका देखिन्छन् तर उनीहरूको इनबक्स हेर्नुभयो भने प्रायः खाली नै हुन्छ ।
धोका दिने प्रवृत्ति भएको मान्छे आफ्ना सबै कुरा लुकाएर राख्न चाहन्छन् । कुनै पुरुषले ज्यादै फ्लर्ट गर्न थाल्यो भने महिलाहरू सावधान भइहाल्नुपर्छ । त्यस्तो मान्छेले तपाईंसँग मीठो कुरा त गर्छ तर तपाईंले भविष्यको कुरा झिक्नुभयो, जिम्मेवारीको कुरा झिक्नुभयो भने टार्न खोज्छ वा भाग्छ ।
यस्तो व्यवहार देखायो भने त्यो मान्छेबाट टाढै रहनु ठीक हुन्छ । तपाईंसँग सम्बन्धित कुरामा लापरवाही देखाउने, तपाईंका महत्वपूर्ण दिनहरू, जस्तै जन्मदिन, बिर्सने अनि जे पायो त्यही बहाना बनाउने मान्छे पनि धोकेबाज हुन्छन् । यस्तालाई भरोसा गर्नु खतरनाक हुन्छ ।